मनोरन्जन – Page9– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १८:४१ English
निमार्ता छवि ओझाविरूद्ध शिल्पाले दिईन् घरेलु हिंसाको उजुरी २५ असार २०७६, बुधबार १२:००
सार्क फिल्म फेस्टिबलमा स्वस्तिमाले जितिन ‘जुरी अवार्ड’ २३ असार २०७६, सोमबार १२:४६
श्रीलंका, २३ असार । श्रीलंकाको कोलम्बोमा सम्पन्न ‘सार्क फिल्म फेस्टिवल’ मा नेपालले दुई अवार्ड हात पारेको छ । चलचित्र ‘बुलबुल’ बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले ‘स्पेशल जुरी अवार्ड–पर्फमेन्स’ जितेकी छन् । स्वस्तिमाले बुलबुलमा निर्वाह गरेको भूमिका उत्कृष्ट भएको ठहर गर्दै जुरीले..
प्रतिष्ठा राउत बेलायतको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इङ्ल्याण्डको फाइनलमा २० असार २०७६, शुक्रबार ०२:२४
काठमाडौं । नेपाली मूलकी प्रतिष्ठा तृष राउत बेलायतको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इङ्ल्याण्डको फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन् । उनी फोटो हिट चरण पार गरेर सेमिफाइनल पुगेकी थिइन् । उनी अहिले फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन् । २० हजार आवेदनबाट उनी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएकी छन् । सेमिफाइनलमा..
सञ्चारमन्त्रीको आक्रोश, ‘आइफाबारे संसदीय समितिले हचुवामा निर्देशन दियो’ १९ असार २०७६, बिहीबार १७:२७
काठमाडौँ, १९ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भारतको आइफा अवार्डका लागि सरकारले पैसा दिने निर्णय नगरेको दोहोर्याएका छन् । ‘आइफालाई कुनै पैसा दिने निर्णय भएको होइन । सरकारले आयोजना गर्ने भनेको होइन’ बास्कोटाले भने ‘मिडिया र..
लमजुङमा बन्नेभयो, विश्वकै अग्लो स्थानको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ १९ असार २०७६, बिहीबार ००:५०
नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौँ, १८ असार । लमजुङको बेंशीसहर नगरपालिकामा निजी क्षेत्रबाट अत्याधुनिक प्रविधिसहितको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ निर्माण हुने भएको छ । पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’का लागि आज नेपालको स्काइ इन्टरटेनमेन्ट प्राली र इटालीयन..
आईफा अवार्ड गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो १८ असार २०७६, बुधबार १४:०३
काठमाडौँ, १८ असार । इन्डियन इन्टरनेशनल फिल्म अवार्ड (आईफा) आयोजना गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । चौतर्फी आलाचना भएपछि सरकारले उक्त अवार्ड कार्यक्रम नेपालमा नगर्ने भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले आइफा अवार्ड यसवर्ष नेपालमा नहुने..
आइफा अवार्ड रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन १७ असार २०७६, मंगलवार १५:५५
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १७ असार । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समतिले नेपालमा हुने भनिएको भारतीय अन्तराष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड (आइफा) रोक्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सांसदहरुको विरोधका कारण अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले भारतीय आइफा अवार्ड..
चलचित्र विकास कम्पनीको २७ रोपनी जग्गा गायब १७ असार २०७६, मंगलवार १२:३१
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १७ असार । चलचित्र विकास कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा गायब भएको छ । राजधानीको बालनजुस्थित उक्त कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा अहिले गायब छ । कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । चलचित्र विकास बोर्डको बार्षिक उत्सवमा सञ्चार तथा..
शम्भु राईलाई लिएर प्रकाश सपुत किन पुगे अपराध महाशाखा ? १६ असार २०७६, सोमबार १३:३९
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १६ असार । चर्चित लोकदोहोरी गित ‘गलबन्दी’ का गायक प्रकाश सपुत गायक तथा सर्जक शम्भु राईलाई लिएर महानगरीय अपराध महाशाखा टेकु पुगेका छन । आफ्नो गीतसँग भाका मिलेको भन्दै गलबन्दीका सपुत र राईबीच सहमति भएपनि जातीय विवादमा मुछिएपछि उनीहरु प्रहरी अपराध महाशाखा..
आईफा अवार्ड नेपालमा हुँदा के हुन्छ ? १५ असार २०७६, आईतवार ११:५६
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १५ असार । भारतको इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आईफा) नेपालमा हुने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले काठमाडौँमा यो अवार्ड कार्यक्रमको आयोजना गर्न स्वीकृत दिएपछि नेपालको जनमत बाडिएको छ । कोही अवार्ड कार्यक्रम नेपालमा हुनु गौरव र क्षमता प्रदर्शनको..
एसइई रिजल्टः शान्ता चौधरीलाई करिश्मा मानन्धरले जितिन १२ असार २०७६, बिहीबार १७:२२
काठमाडौँ, १२ असार । बिहीबार एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुने भनिएपछि सामाजिक सञ्जालम नेकपा नेतृ शान्ता चौधरी र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको नतिजा कस्तो आउला भनेर धेरै प्रतिक्षामा थिए । नतिजामा भने नेतृ शान्ता चौधरीले ‘बी’ ग्रेड ल्याएकी छन् भने अभिनेत्री मानन्धरले ‘बी’ प्लस..
‘गलबन्दी’ विवाद सुल्झियो ११ असार २०७६, बुधबार १५:३४
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ११ असार । प्रकाश सपुतको दोहरी गीत ‘गलबन्दी’ मा देखिएको विवाद सुल्झिएको छ । सर्जक शम्भु राईले उक्त गीत आफ्नो पुरानो देउसी भैलो गीत ‘आउ नाचौ’सँग मिलेको भन्दै प्रतिलिपी अधिकार दाबी गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । अब गलबन्दी गीतको संगित सिर्जनामा शम्भु राईको..
नेपालमा विदेशी टिभी च्यानल बन्द ९ असार २०७६, सोमबार १७:३४
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ असार । आज दिउँसो ३ बजेबाट नेपालमा बिदेशी टिभी च्यानल बन्द भएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले २४ घण्टाको लागि बिज्ञापन प्रसारण हुने सम्पूर्ण बिदेशी च्यानल बन्द गरेका हुन् । प्रस्तावित विज्ञापन ऐन, २०७६ को..
संसदमा पुग्यो ‘गलबन्दी’ विवाद, मुद्दा हाल्नेलाई कारबाहीको माग ९ असार २०७६, सोमबार १६:३४
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ असार । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विवादित बनेको लोकगीत ‘गलबन्दी’को प्रसंग उठेको छ । लय चोरेको भन्दै गलबन्दीका सर्जक प्रकाश सपुतविरुद्द मुद्दा लगाईएकोप्रति सांसदले दलित भएकै कारण सपुतमाथि मुद्दा हालिएको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद..
‘चलचित्रमा नृत्य’ नामक एक दिने कार्यशाला सम्पन्न ७ असार २०७६, शनिबार २३:१३
काठमाडौं, ७ असार । नेपाल चलचित्र नृत्य संघले ‘चलचित्रमा नृत्य’ नामक एक दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । राजधानीमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नृत्य कर्म गर्नेहरुको संघ नेपाल चलचित्र नृत्य संघले शुक्रबार ‘चलचित्रमा नृत्य’ नामक एक दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको हो । चलचित्र विकास..
‘गलबन्दी’ ले भाका चोरेको भन्दै प्रकाश समुत विरुद्द शम्भु राईले हाले मुद्दा ६ असार २०७६, शुक्रबार १३:०२
काठमाडौँ, ६ असार । गीतकार तथा संगीतकार शम्भु राईले आफ्नो गीत चोरी भएको दावी गर्दै मुद्दा हालेका छन् । अहिले निकै चर्चित रहेको गीत गलबन्दी आफ्नो ‘आऊ नाचौं साथी हो’ भन्ने गीतको कपी भएको दाबी गर्दै राईले प्रकाश सपुतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । बिहीबार प्रकाश सपुतविरुद्ध..